Date My Pet » 9 Misi wose From San Francisco Rinoenderera Mberi
Last updated: Jan. 27 2021 | 3 Maminitsi verenga
Vanhu San Francisco ndivo romantics chaidzo; vanoziva sei kuti kutendeuka musi rive zuva wakakwana. zvisinei, nzvimbo huru dzakawanda kuenda zuva muguta, zvakaoma nerongo wenyu kufambidzana urongwa. Chikamu pazasi hurukuro inenge mipfumbamwe misi vose muSan Francisco shangu kuenda.
1. A makatasva musi Magic Bus SF
Mashiripiti Bus achatora iwe uri 90 miniti Psychedelic dzinoyevedza rwendo San Francisco. Panguva Multimedia ichi chinofadza rwavakaita, uchawana kuparidzira pamwe zvikuru taitaura hippie tsika uye nezvimwe pamadziro zhinji kwakadaro kuma1960. The rwendo vachakupai zvose iwe nemumwe wako mijenya ndangariro kukoshesa.
2. Mutore kuna Ocean Beach
Kana mumwe wako ane Outdoor Zvokutopenga, iye achava zvechokwadi nzvimbo ino. Ocean Beach riri pedyo Golden State Park; nguva zvauchasangana vanopedza pano vachava inonakidza uye mafaro-vakazadzwa. Tora chikamu mabasa akadai kubhururutsa kayiti, Hiking, uye cu; uye ipapo vanopedza vamwe chinozorodza maawa pamwe pamusoro girazi gunsteling coctail.
3. Enda Wehove kuti Wharf kuti chisvusvuro zuva
Mubati wehove Wharf anoramba zvikuru ungana zvinenge zvose kuburikidza zuva; zvisinei, kana uchigona kushandisa kushanyira nzvimbo pamberi 9 a.m., zvichaita zvirokwazvo kukupa nyaradzo iwe nemumwe wako Unoshuva.
Iva dzakatigamuchira chisvusvuro, tarisa gungwa shumba kunze uye sezvo zuva mberi kuenda Pier 39 vamwe kutenga. Kuti zuva zvishoma zvinonakidza, uchigonawo kutora waya motokari kukwira kubva Wehove kwakaita Wharf kuna Union Square.
4. A bhasikoro bhiza achishandisa Bay Area
Kana zviri kuwa zuva, enda kuti bhasikoro kukwira kuna SF Bay Area. Zvose uchawana achava kubatwa dzorudo; ngazviitwe mavara, kwemhepo kana vachiwaridza Rinofembedza.
5. Enda rinokosha Movie zuva
Pane kuenda kufirimu dzose musi, musoro Castro Theater, munhu vakapemberera Movie mumuzinda uye mumwe zvikuru nevanhu varipo risingakanganwiki muSan Francisco. Other pane nemitambo repertory mafirimu uye firimu mitambo, Naiwo mumatanho zvakawanda chaizvo zviitiko.
6. Tipedze maawa mashomanana Forbes Island
Zvinongoreva havagoni kuwana zvakawanda kudanana pane ichi; vanoshanyira Forbes Island mudiwa wako uye iwe zvirokwazvo vamwe zvikuru romukova dating Ndangariro.
Kumbira mudzimai wako kana musikana shamwari kuunza bhachi naye sezvo kwemhepo kazhinji runako chando pano. Kana ukakanganwa kumuyeuchidza, usanetseke; kupa bhachi rako kana jasi ndiye anguva, asi chaizvoizvo chinonhuhwira nzira kuita vakadzi vanonzwa tichidiwa.
7. Ronga mhepo inopisa chibharuma tasva
madokero chapupu muSan Francisco kubva mhepo inopisa chibharuma; Mudiwa wako kuda zvirokwazvo vakashamiswa zvarisingazivi sarudzo yenyu. Ichi akakwana kufambidzana pfungwa rokupemberera pazviitiko. Kupedza kwavaizoenda ane zvokudya guru Champagne tositi.
8. A rwendo kuenda Crissy Field
Crissy Field ichapa imi mikana siyana kutendeusira hwandaiva kwavaizoenda kuva kudanana zuva. nzvimbo, rwaaimboparadza kushandiswa kuva US Army Banga, zvino rapinzwa Gate Golden National Recreation Area.
At Crissy Field, unogona kubhururuka kayiti, vane kofi pane imwe Datenroku pedyo, kana chete vanopedza pemaawa kunyarara nomumwe wako ndichiona zvinyoronyoro kaatuu nemafungu uye mukare kumahombekombe girl.
9. Enda nokuti nemasitepisi kufamba
Izvi zvingaita sokuti kuva isina chaizvo kufambidzana pfungwa, asi kana uri San Francisco nemasitepisi kufamba Zvirokwazvo munhu anofanira-kuedza kudanana nezvechisarudzo. Guta kumusha dzinoverengeka yakasiyana uye naka masitepisi; vazhinji masitepisi izvi vanowanwa chaisvika uye somugumisiro vane runako kudanana backdrops. Two SF masitepisi kuti kudanana zvikuru makwapa vari Lyon Street Step, uye 16th Avenue Tile Matanho.
Ndivo mapfumbamwe chete misi vanhu muSan Francisco harimbofaniri kurovha kuchipfuurira. Chii kukuru pamusoro pavo kuti musingadi vanofanira kupedza zviuru zvemadhora kuti chero yemichindwe izvi, asi zvakadaro uchawana kupedza vamwe asingakanganwiki uye wakazadzwa nguva nomumwe wako.